mars | 2021 | InfoKmada
Coronavirus : hampitomboana ny toerana handraisana marary amin’ny faritra maro
InfoKmada - 31 mars 2021 0
Mihamafy ny valan’aretina ka tokony hitandrina ny tsirairay avy, araka ny fanambarana nataon’ireo mpikambana eo anivon’ny FFKM taorian’ny fihaonan’izy ireo tamin’ny filoha Andry RAJOELINA teny Ambohitsirohitra ny maraina teo.
Coronavirus : nihaona tamin’ny Filoham-pirenena ny FFKM
Manoloana ny fihanaky ny valan’aretina Coronavirus, nifampidinika tamin’ny filoham-pirenena ny maraina teo ireo mpikambana ao amin’ny FFKM. Afaka mandray fepetra mifanandrify aminy ny fiangonana raha ilaina izany, araka ny fanambarana nataon’ireo mpikambana ao amin’ny FFKM, taorian’ny dinika nifanaovana.
FMI : nankatoavina ny fanomezana 312,4 Tapitrisa dolara an’i Madagasikara
Nankatoavin’ny filankevi-pitantanan’ny FMI ny fanomezana 312,4 Tapitrisa dolara ho an’i Madagasikara, amin’ny alalan’ny FEC na ny Facilité Elargie de Crédit, mandritry ny 40 volana. Hanohanana ny programam-panjakana mahakasika ny fanavaozana ara ekonomika entina hampihena ny fahantrana sy hahazoana fitombon’ny ari-karena maharitra ity famatsiam-bola ity.
Fanorenana tsy ara-dalàna : nomena iray volana ny tompon’antoka hialany
Nomena iray volana ny tompon’antoka tamin’ny fanotofana tany sy fanorenana trano tsy ara-dalàna amin’ny imoron’Ikopa eny Tanjombato. Hirosoana avy hatrany ny fandrodanana aorian’ny fahataperan’ny fe-potoana hoy ny tomponandraikitra avy amin’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy eto Analamanga.
Olon-tsotra manampina lalana: vao maika manimba
Manafaingana ny fahasimban’ny lalana ireo olon-tsotra manampina lalana saika hita manerana ny nosy hoy ny tomponandraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny asa vaventy. Tokony handrara ireny ny fokontany sy ny kaominina voakasika raha ny fanazavana.
Vokatra Malagasy : kazarany 04 no tsy neken’ny tsena Eropeana nanomboka ny janoary 2021
Karazam-bokatra miisa 04, amin’ny taonina maro avy eto Madagasiakara, no naverin’ny Vondrona Eropeana noho izy ahitana tahan’ireo « Pesticide » izay efa tsy eken’ny tsena Eropeana intsony. Isan’izany ireo voamaina toy ny tsaramaso, lojy ary koa ny vanille sy Litchis. Tsy maintsy hanaraka ireo fepetra takiana ireo isika raha tiana ny hampihodina ny toekarena sy hampaharitra ireo lalam-barotra.
Amiraly Didier Ratsiraka : tontosa teny Iavoloha ny fanomezam-boninahitra ara- miaramila azy
InfoKmada - 30 mars 2021 0
Tontosa androany teny Iavoloha nialohan’ny nanitrihan’azy teny amin’ny fasan’ny mahery fo Mausolée, ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila ny filoha teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka. Tsy misy afaka mandà hoy ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina fa tena nahavita zavatra maro teto amin’ny firenena ny Amiraly Didier Ratsiraka ka mendrika azy ny fanomezam-boninahitra tahaka ny androany.
Didier RATSIRAKA : feno olona hanao veloma farany azy ny lalana rehetra
Tomefy olona, hanao veloma farany ny Filoha teo aloha Didier RATSIRAKA, ny lalana rehetra nolalovany androany, niala teny amin’ny Hopital Militaire Soavinandriana hihazo an’Iavoloha ary niala teny Iavoloha hihazo an’i Mausolée toerana hametrahana ny vata-mangatsiakany. Mendrika azy ny fanotronana tahaka izao noho izy nahavita be teto amin’ny Firenena.
Amiral Didier Ratsitraka : nalevina amin’ny fasan’ny mahery fo eny Mausolée
Teny amin’ny fasan’ny mahery fo - Mausolée no nalevina ny vata mangatsiakan’ny filoha teo aloha Amiral Didier Ratsitraka. Tonga nanotrona izany ny filoha Andry RAJOELINA mivady, sy ireo filohan’ny andrim-panjakana ambony. Mankasitraka ny vahoaka Malagasy ankilany ny fianakavian’ny ratompokolahy amin’ny fiaraha-miory tamin’izy ireo.
29 Mars 1947 : feno 74 taona androany, tsy nisy fahatsiarovana manokana
Noho ny fisaonam-pirenena vokatry ny fahalasanan’ny Filoha teo aloha Didier RATSIRAKA, eo ihany koa ny COVID-19, tsy nisy ny fahatsiarovana manokana sy fanateram-boninkazo ny andron’ny 29 Martsa. Na izany aza, tokony ho tsiahivina hatrany amin’ny alalan’ny fameloma-maso ny tantara indray ny 29 Martsa 1947, izay feno 74 taona amin’ity 2021 ity.